JUMPER EZbook X4 လက်ပ်တော့ပ ...
အစကွန်ပျူတာနှင့်ကွန်ပျူတာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှတ်ချက်စာအုပ်Jumper EZbook X4 လက်ပ်တော့
Jumper EZbook X4 လက်ပ်တော့
Price History Jumper EZbook X4 လက်ပ်တော့ပ် 4GB 128GB Silver
€ 310,97 - မေလ 2020, 11
€ 311,51 - Aprilပြီလ 2020, 28
€ 310,06 - Aprilပြီလ 2020, 20
€ 308,08 - Aprilပြီလ 2020, 13
€ 312,19 - Aprilပြီလ 2020, 7
€ 303,22 - မတ်လ 2020, 31
€ 315,46 - မတ်လ 2020, 23
€ 301,84 - မတ်လ 2020, 16
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 336,99 - ဇူလိုင်လ 2019, 26
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 265,10 - ဇွန်လ 2019, 12
Jumper EZbook X4 Laptop ကို 4GB 128GB Silver,
Jumper EZbook X4 Laptop ကို 14.0 လက်မအရွယ် IPS screen ကို
Jumper EZbook X4 Notebook Intel က Gemini ရေကန် N4100 4GB RAM ကို + SSD ကို 128GB ကို Windows 14.0 10 လက်မ Laptop ကို
●Microsoft Windows နဲ့ 10 မူလစာမျက်နှာ OS ကို
●14.0 လက်မ FHD မျက်နှာပြင်
ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းနှင့် Web browsing များအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းကမ်းလှမ်း
●4100GHz မှတက် Gemini ရေကန် N1.1 Intel က Quad Core 2.4GHz,
ultra-Low-ဗို့ပလက်ဖောင်းနှင့် Quad-core အပြောင်းအလဲနဲ့အများဆုံး High-ထိရောက်မှုပါဝါပေး
●Intel HD Graphics ကိုပေါင်းစည်းဂရစ်ဖစ် 600
●အဆင့်မြင့် multitasking များအတွက် rated 4GB DDR4L RAM ကို
ချောချောမွေ့မွေ့သင့်ဂိမ်းများ, ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယို-တည်းဖြတ်ရေး applications များ run ဖို့သိသိသာသာမြင့်မားသော bandwidth ကို RAM က
●128GB SSD ကိုသိုလှောင်စွမ်းဆောင်ရည်
ဓါတ်ပုံတွေသိမ်းထားဖို့အခန်းတစ်ခန်း, ဗီဒီယို, သီချင်းနှင့်ပိုပြီးထောက်ပံ့
●ဓာတ်ပုံများနှင့်မျက်နှာ-to-မျက်နှာ Chat ကိုများအတွက်ရှေ့ကင်မရာ
2.0MP ရှေ့ကင်မရာသင်အမှတ်ရစရာအချိန်လေးကိုဖမ်းယူဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat ခွင့်ပြု
●Dual-Band 2.4GHz / 5.0GHz Wi-Fi
တစ်ခုမရရှိနိုင်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်၏အကွာအဝေးအတွင်းနေချိန်မှာသင်က Web မှဆက်သွယ်ခွင့်ပြု
သင်တစ်ဦး high-definition မော်နီတာသို့မဟုတ်ပရိုဂျက်တာဖို့စက်ကိရိယာကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်
CPU ကို: Intel က Gemini ရေကန် N4100
CPU ကိုအမှတ်တံဆိပ်: Intel က
graphic chipset: Intel HD Graphics 600
ဂရပ်ဖစ်အမျိုးအစား: Integrated graphics
မော်ဒယ်: EZbook X4
OS ကို: Windows ကို 10
ဂရပ်ဖစ်ကတ်ကြိမ်နှုန်း: 200 - 700MHz
Hard Disk ကို Interface အမျိုးအစား: M.2
Hard Disk ကိုမှတ်ဉာဏ်: 128GB
RAM ကိုအမျိုးအစား: DDR4L
အလှည့်မြန်နှုန်း: 500M / S က
ပံ့ပိုးမှုကွန်ယက်: Dual-Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz
display အချိုး: 16: 9
screen resolution: 1920 x ကို 1080 (FHD)
screen size: 14 လက်မ
screen အမျိုးအစား: 1080P FHD
3.5mm headphone jack: ဟုတ်ကဲ့
DC ကဂျက်: ဟုတ်ကဲ့
micro HDMI slot ပါ: ဟုတ်ကဲ့
TF ကဒ် slot ပါ: ဟုတ်ကဲ့
USB ကအိမ်ရှင်: ဟုတ်ကဲ့ (2x ကို USB 3.0 Host က)
ဘက်ထရီအမျိုးအစား: 7.6V / 4600mAh
နာယက: Built-in Dual-Channel ကိုနာယက
standby အချိန်:4-5နာရီ
နောက်ခံအလင်းအမျိုးအစား: Backlit ကီးဘုတ်
package အရွယ်အစား: 40.00 x ကို 34.50 x ကို 8.00 စင်တီမီတာ / 15.75 x ကို 13.58 x ကို 3.15 လက်မ
package အလေးချိန်: 1.8070 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 33.30 x ကို 22.00 x ကို 1.30 စင်တီမီတာ / 13.11 x ကို 8.66 x ကို 0.51 လက်မ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 1.3630 ကီလိုဂရမ်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Jumper EZbook X4 လက်ပ်တော့
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Jumper, မော်ဒယ်: EZbook X4 OS ကို: Windows ကို 10, CPU ကို: Intel က Gemini ရေကန် N4100,1.1GHz ~ 2.4GHz, Quad Core, Display ကို chip ကို Intel HD Graphics 600
ရမ်: 4GB RAM ကိုအမျိုးအစား: DDR4L Hard Disk ကိုမှတ်ဉာဏ်: 128GB SSD ကို Hard Disk ကို Interface အမျိုးအစား: M.2 2242
screen size: 14inch, Display ကိုအချိုး: 16: 9, screen resolution ကို: 1920 1080 (FHD) က x
WIFI: 802.11b / g / n / ac ကြိုးမဲ့အင်တာနက် 2.4G + 5G ဘလူးတုသ်: 4.0, LAN Card ကို: ဟုတ်ကဲ့
ကင်မရာအမျိုးအစား: လူပျိုကင်မရာ, ရှေ့ကင်မရာ: 2.0MP
USB ကအိမ်ရှင်: 2xUSB3.0 ဆိပ်ကမ်းတခု, Micro SD Card ကိုဟုတ်တယ်, Mini ကို HDMI: ဟုတ်ပါတယ်, 3.5mm နားကြပ်, မိုက်ကရိုဖုန်း combo ပေါက်: ဟုတ်ပါတယ်, DC ကပေါက်: ဟုတ်ကဲ့
ဘက်ထရီ: 7.6V, 5000mAh Polymer ဘက်ထရီ, ပါဝါစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား: AC အဒပ်, 100-240V, အားသွင်းဗို့: DC က 12V 3
ဗီဒီယိုကို format နဲ့: AVI / RM / RMVB / MKV / WMV / MOV / MP4 / PMP / MPEG / MPG / FLV / ASF / TS / TP / 3GP / MPG, အသံ format နဲ့: MP3 / WMA / WAV / ape / AAC / FLAC အ / OGG ရုပ်ပုံပုံစံ: JPG / BMP / PNG / GIF ကို eBook ပုံစံ: Word / Excel / PDF ဖိုင်ရယူရန် / TXT / CHM / HTML ကို
sensor: NO နာယက / MIC: Built-in စတီရီယိုစပီကာနှင့်မိုက်ကရိုဖုန်း, ဘာသာစကားများ: မှာ Windows OS ကို Pre-installed တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်ပါသည်, နှင့်အခြားဘာသာစကားများ Wi-Fi တို့ကဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့လိုအပ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 322x222x13.7 မီလီမီတာကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 1300g
charger: 1, အင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ်: 1, Notebook: 1
Mikha - 2019 10 ဇွန်
1.Отличныйвыбор.2။ Доставка 20 дней3။ Рекомендую. -Объясните, почемувывыбралитакуюоценку။ -Объясните, чтовамнравитсяилиненравитсявэтомпродукте။ -Опишите, наскольковыудовлетвореныкачествомпродукта။ -Опишите, какиефункциипроизвелинаваснаибольшеевпечатление (например, времяавтономнойработысмарт-часовилиразмериподгонкаплатья) -Сравнитепреимущества / недостаткисдругимиподобнымипродуктами။
Caio kitagaki - 2019 10 ဇွန်
အဆိုပါ SD ကဒ် slot ကထဲကနေဖို့။ သင် ROM ကိုမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးပှားထင်လျှင်ဒါဟာမကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒါက slot ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးကတည်းကတစ်ဦးခြားနားအောင်လုပ်ပေးမထားဘူး။ မကြာခဏကီးဘုတ်အရူးသွားသည်နှင့်သော့ပြတင်းပေါက်အသေးအဖွဲများကဲ့သို့အခြားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်ယူပါ။ သင် problem.estou arrependido fix ဖို့မှတ်စုစာအုပ်ကို restart လုပ်ပါဖို့လိုပါတယ်။ နှင့် SD ကဒ် permanece semper အစည်းအဝေးများတွင် slot က (como mostra ဓာတ်ပုံ) လုပ်ပါ။ isso évocê se péssimo Pensa em aumentar တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်မှတ်စုစာအုပ်စရဖ isso Nao အဆင့် diference ကြောင့် Que Nao slot က Le Cartãoကြီး၏ (ကကြေးနီစောင်း) လုပ်ပါ။ Frequentemente နှင့် FICA teclado estranho ။ Tecle assumem funções Aleator como minimizar fechar Janelas အီးအဖြစ်။ éလိုအပ်သော reiniciar နှင့်မှတ်စုစာအုပ်နှင့်မသန်စွမ်း corrigir ပြဿနာ။
Beagle - 2019 10 ဇွန်
တစ်ဦးကmáquinaé bem Frias! Totalmente silenciosa (SEM အေး) .Peso: muito leve, ideal.Tamanho: 14 polegadas, tamanho တာဝန် bom.Tela: FullHD, muito bom ။ Pena SER Tela TN (Saiu တစ် Versati က IPS Agora, essa တေးဂီတ mais Linda sim) Teclado Geral က de bom tamanho.No တစ်máquinaé bem Rapids နှင့် SSD ကို ajuda တာဝန်! ထိုအ processador da conta က de muita coisa, ele é bem fortinho! Tecle tem Que ligar အဖြစ် ler ပြီးနောက် Poder Ter Uma HDMI (ou mini ကို HDMI) .Teclado Cinzia mal da နှင့် mesmo က de dia.Tela tn retroiluminado (စရဖ isso eu က Sabia တစ် Versati PIC existe) Que acredito Então Nao seja bem အွမ် Contra entrega por အတွက် .AUDIO érazoávelအစုလိုက်အပြုံလိုက်အွမ်preço esse som "bom" ။
ALLDOCUBE M5 လက်ပ်တော့ / တက်ဘလက် (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 10,1 လက်မအရွယ် screen)
Cube ကိုရောသမ Plus အားလက်ပ်တော့ / တက်ဘလက် (10,6 လက်မမော်နီတာ, 4GB RAM ကို, ROM ကို 128GB)
Xiaomi က Mi Air ကို 13 လက်တော့ကွန်ပျူတာ (Intel Core Processor ကို i5, 13,3 လက်မအရွယ် IPS Monitor ကို, 8GB RAM ကို, ROM ကို 256GB)
Huawei MateBook X ကို Pro ကိုလက်တော့
1 482,57 €
Chuwi Hi9 Air ကိုလက်တော့ / တက်ဘလက် (4GB RAM ကို, ROM ကို 64GB, 10,1 လက်မအရွယ် screen)
Lenovo က Legion R720 Gaming Laptop ကို 15.6 လက်မလက်တော့ (i5-7300HQ, GTX1050Ti 4GB, 8GB RAM ကို)